Warri Abiyyi Ahmed deeggaran maaliif akka ta’e beektuu? Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWarri Abiyyi Ahmed deeggaran maaliif akka ta’e beektuu?
@ warri Amantii protestaantii hordofan “Namichi pheenxee waan ta’eef nama keenyatu muudame’ kun hojii Yasuusi” jedhu@ Musiliimonni (tokko tokko ) Abiyyi “Ahmed Alii” waan ta’eef nama keenyatu masaraa seene jedhu. Keessattuu maqaan kun Biyyoota Arabaa gowwoomseera. Qarshii Biliyoonatti lakkaawamu kennuun isaanii ; Muummichi Ministeera Itoophiyaa Musiliima” jedhanii yaadan.
@ warri Ortodoksii namichi qor-qalbii ortodoksummaa akka qabu beeku.
@ Oromoonni tokko tokko Abiyyi Ahmed abbaan Oromoodha ; kanaafuu Oromootu aangoo qabate jedhanii deeggaru @ Amaarri Abiyyi Ahmed haadha jaallata. haati isaammoo Amaara; kana qofa miti Haati Manaa isaa Amaara Gondoreedha; ijoolleen isaa Amaara; innimmoo Itoophiyummaa jaallata kanaafuu inni kan keenya malee kan Oromoo miti; OPDO hin deeggarru Abiyyi Ahmed ni deeggarra jedhu.
Namichi kanaan tifoozoo argate malee kaayyoo siyaasaa Oromoof ta’u tokkollee hin qabu. Yoo danda’e #Oromummaa balleessee Itoophiyaa atsootaa dhugoomsee #Atsee_Abiyyi jedhamuu barbaada
Ethiopia: ዘ-ሐበሻ የዕለቱ ዜና | Zehabesha Daily News July 9, 2019